ဆင်တူရိုးမှား သတိထား အင်္ဂလိပ်စကားလုံးများ (၄) - Myanmar Network
ဆင်တူရိုးမှား သတိထား အင်္ဂလိပ်စကားလုံးများ (၄)
Posted by zar ni (My Way!) on December 2, 2013 at 12:23 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
alternate နှင့် alternative
alternate သည် “တစ်လှည့်စီဖြစ်သော၊ တစ်(ရက်/ပတ်/ လ/နှစ်)ခြားဖြစ်သော” အဓိပ္ပါယ်ရသည့် နာမ၀ိသေသနဖြစ်သည်။
alternative အား adjective အနေဖြင့်သုံးလျှင် “အခြားသော၊ သမရိုးကျမဟုတ်သော” အဓိပ္ပါယ်ရပြီး noun အနေဖြင့်သုံးလျှင် “အခြားရွေးချယ်စရာ၊ အခြားနည်းလမ်း” အဓိပ္ပါယ်ရသည်။
We visit our grandparents on ALTERNATE Saturdays. (= every other Saturday)
I ALTERNATE between hope and despair. (= have each mood in turn)
(မျှော်လင့်ချက်တစ်ခါ၊ လက်မှိုင်ချတစ်ခါ )အားတက်တဲ့အခါတက်လိုက်၊ စိတ်ဓါတ်ကျတဲ့အခါကျလိုက်ပဲ။
An ALTERNATIVE plan would be to go by boat. (= another possibility)
alternative engegy ကမ္ဘာ့သယံဇာတတို့ကိုအန္တရာယ်မပြုဘဲ နေရောင်ခြည်၊ ရေ၊ လေ စသည်တို့မှ ထုတ်ယူရှိသောစွမ်းအင်
alternative medicine ဓာတုဗေဒနည်းဖြင့်ဖော်စပ်သောဆေးမျိုးမသုံးသည့်ကုသနည်း။ သဘာဝကုထုံး
alternative comedy သမရိုးကျမဟုတ်သောဟာသ
The ALTERNATIVES are simple: work or go hungry. (= two choices)
ရွေးချယ်စရာတွေကတော့ရှင်းပါတယ်။ အလုပ်လုပ်မလား၊ အငတ်ခံမလား။
တိတိကျကျပြောမည်ဆိုလျှင်တော့ alternatives သည် ရွေးချယ်စရာနှစ်ခုထဲကဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် အခုအခါ အဆိုပါအဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်ချက်အတိုင်းအတိအကျလိုက်နာသုံးစွဲခြင်းနည်းလာကြပြီး နှစ်ခုထက်ပိုသည့်ရွေးချယ်စရာများအဖြစ်လည်းသုံးလာကြပါသည်။
ambiguity အဓိပ္ပါယ်ေ၀၀ါးစေခြင်း။ အနက်ထွေပြားခြင်း
အင်္ဂလိပ်စာကိုရေးသားသည့်အခါ မိမိဆိုလိုသည့်အဓိပ္ပါယ် စာဖတ်သူထံရောက်မရောက် သေချာစွာစစ်ဆေးသင့်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်
(a) pronoun များသည်စာဖတ်သူအတွက် မည်သူ့ကို ရည်ညွှန်းကြောင်း မထင်ရှားသည့်အခါနောက်တစ်နည်း ပြန်ပြင်ရေးသင့်သည်။
My brother told his friend that HE had won first prize in the local photographic exhibition.
ဤတွင် he သည်မည်သူဖြစ်သနည်း။ my brother လား his friend လား မရှင်းပေ။ အောက်ပါအတိုင်းပြန်ပြင်ရေးလိုက်လျှင်ရှင်းသွားမည်ဖြစ်သည်။
(a) My brother congratulated his friend on winning first prize in the local photographic exhibition.
(b) My brother, delighted to have won first prize in the local photographic exhibition, told his friend.
(b) ကြိယာဝိသေသနတစ်ခုဖြစ်သည့် only သည်လည်းပြဿနာပေးတတ်သောစကားလုံးဖြစ်သည်။ သူ၏နေရာကိုသတိဖြင့်ထားပါ။ only သည်သူနှင့်အနီးကပ်ဆုံးစကားလုံး(အထူးသဖြင့် သူ့နောက်ကလိုက်သည့် စကားလုံး) ကိုရည်ညွှန်းလေ့ရှိသည်။ နေရာအထားမှားပါက မိမိရည်ရွယ်သည့်အဓိပ္ပါယ်ရောက်မည်မဟုတ်ပေ။ အောက်ပါဝါကျများတွင် နေရာပြောင်းသွားရုံနှင့်အဓိပ္ပါယ်ပြောင်းသွားပုံကိုလေ့လာကြည့်ပါ။
ONLY John eats ﬁsh on Fridays. (ကျန်မည်သူမှငါးမစား)
သောကြာနေ့တွင် ဂျွန် တစ်ယာက်တည်းသာ ငါးစားသည်။
John ONLY eats ﬁsh on Fridays. (ငါးကလွဲ၍ကျန်တာမစား)
သောကြာနေ့တွင် ဂျွန်သည် ငါးသာစားသည်။
John eats ﬁsh ONLY on Fridays. (အခြားနေ့များတွင်ငါးမစား)
ဂျွန်သည် သောကြာနေ့များတွင်သာ ငါးစားသည်။
(c) badly ၏တည်နေရာကိုလည်းဂရုပြုပါ။
This room needs cleaning BADLY. (သန့်ရှင်းဖို့လိုသည်လား မလိုဘူးလားမရှင်းပေ။)
This room BADLY needs cleaning.
ဤအခန်းသည် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန် အလွန်လိုအပ်နေသည်။
(d) comma သည် ခေတ္တရပ်ခြင်း၊ ပုဒ်ဖြတ်ပေးသည်။ ကော်မာထည့်သင့်သည်နေရာတွင်မထည့်မိပါကေ၀၀ါးမှုကိုဖြစ်စေမည်။
The shabby little riverside cafe was empty and full of wasps and flies. (empty and full ဆန့်ကျင်ဖက်နှစ်ခုတွဲနေသည်။)
The shabby little riverside cafe was empty, and full of wasps and flies.
စုတ်ချာချာမြစ်ကမ်းနဘေးကကော်ဖီဆိုင်ကလေးသည် လူသူကင်းမဲ့ကာ ယင်တလောင်းလောင်းနှင့်ဖြစ်သည်။
DRIVING slowly along the road, THE CASTLE dominated the landscape. (ရဲတိုက်သည်ကားမောင်းနေသည်)
As we drove slowly along the road, we saw how the castle dominated the landscape.
ကားလမ်းတစ်လျောက်ဖြည်းညှင်းစွာကားမောင်းလာခဲ့ရင်း ရှုခင်းထဲတွင် ရဲတိုက်က လွှမ်းမိုးနေရာယူ သည်ကိုတွေ့ရသည်။
COOKED slowly, the FAMILY will enjoy the cheaper cuts of meat. (အချက်ခံရသည်ကမိသားစု)
If the cheaper cuts of meat are cooked slowly, the family will enjoy them.
ဈေးခပ်ပေါပေါအသားတုံးတွေကို ဖြည်းဖြည်းချင်းချက်မယ်ဆိုရင် အိမ်သားတွေကြိုက်ကြမှာပါ။
amend နှင့် emend
အဆိုပါစကားလုံးနှစ်ခုလုံးသည် “ပိုကောင်းအောင်ပြုပြင်သည်” ဟူသည့်အဓိပ္ပါယ်ရသည်။
ရေးသားပုံနှိပ်ထားသည့်စာများကိုပြင်ဆင်သည်ဟုပြောလိုလျှင် amend နှင့် emend နှစ်မျိုးစလုံးကိုသုံးနိုင်သည်။
The text is currently being emended and will be published shortly.
လောလောဆယ် စာကိုပြင်နေတယ်။ မကြာခင်ထုတ်ဝေတော့မယ်။
Until the constitution is amended, the power to appoint ministers will remain with the president.
အခြေခံဥပဒေအားမပြင်ရသေးချိန်အထိ ၀န်ကြီးများကိုခန့်အပ်နိုင်သည့်အာဏာသည် သမ္မတထံတွင်တည်နေဦးမည်။
AMENDING the law ဥပဒေပြင်ဆင်ခြင်း
AMENDING behavior အကျင့်စရိုက်ကိုပြင်ဆင်ခြင်း
among နှင့် between
between အားလူနှစ်ဦး၊ အရာဝတ္ထုနှစ်ခုကြား မျှဝေထားသည့်အရာကိုညွှန်း ရန်သုံးသည်။ အချိန်ကိုညွှန်းသည့်အခါ အချိန်နှစ်ခုကြား၊ ဖြစ်ရပ်များကြားရှိအရာကိုပြရန်သုံးသည်။
Share the sweets BETWEEN the two of you.
There isabreak of ten minutes between classes.
among ကိုတော့ သုံးဦးထက်ပိုသည်တို့ကြားကအရာကိုညွှန်းရန်သုံးသည်။ အုပ်စုတစ်ခုအတွင်းရှိအရာ ကိုညွှန်းရန်သုံးသည်။
Share the sweets AMONG yourselves.
I sawafew familiar faces among the crowd.
သို့ရာတွင် between အား ပထ၀ီဝင်တည်နေရာအတိအကျ သို့မဟုတ် ဆက်စပ်မှုတို့ကိုပြသည့် နှစ်ခုထက်ပိုသည့်အရာတို့နှင့်လည်းသုံးနိုင်သည်။
Sardinia lies BETWEEN Spain, Algeria, Corsica and Italy.
ဆာဒီနီးယားသည် စပိန်၊ အယ်ဂျီးရီးယား၊ ကော်စီကာနှင့် အီတလီတို့ကြားတွင်တည်ရှိသည်။
It will takealong time before the rift BETWEEN the ﬁve main parties heals.
Broken English to Spoken English
09 448 033 674
ဆင်တူရိုးမှား သတိထား အင်္ဂလိပ်စကားလုံးများ (၁)
ဆင်တူရိုးမှား သတိထား အင်္ဂလိပ်စကားလုံးများ (၂)
ဆင်တူရိုးမှား သတိထား အင်္ဂလိပ်စကားလုံးများ (၃)
ဆင်တူရိုးမှား သတိထား အင်္ဂလိပ်စကားလုံးများ (၅)
ဆင်တူရိုးမှား သတိထား အင်္ဂလိပ်စကားလုံးများ (၆)
ဆင်တူရိုးမှား သတိထား အင်္ဂလိပ်စကားလုံးများ (၇)
ဆင်တူရိုးမှား သတိထား အင်္ဂလိပ်စကားလုံးများ (၈)
ဆင်တူရိုးမှား သတိထား အင်္ဂလိပ်စကားလုံးများ (၉)
ဆင်တူရိုးမှား သတိထား အင်္ဂလိပ်စကားလုံးများ (၁၀)